Gabalka Togdheer oo Lagu Tababaryo Maleeshiyaad Taageersan Jwxo-shiil – Rasaasa News
Gabalka Togdheer oo Lagu Tababaryo Maleeshiyaad Taageersan Jwxo-shiil
Sep 30, 2010 ethiopia, Gabalka Togdheer oo Lagu Tababaryo Maleeshiyaad Taageersan Jwxo-shiil, Ogaden, ONLF, somalia
Burco, [Sept 30, 2010] – Warar laga helay magaalada Burco ayaa waxay sheegayaan in maleeshiyaad aan tiradooda la sheegin oo lagga soo uruuriyey degaanada Somaliland in uu tababar uga socdo xero dhinaca koonfur kaga beegan magaalada Burco una jirta magaalada 23KM.
Macalamiinta tababarka bixinaysa ayaa isugu jira Somali iyo Eritrean, laga soo waariday dalka Eritrea. Xukuumada Eritrea iyo maamulka cusub ee Somaliland ayaa waxaa dhexmaray heshiis cusub oo hoose, lama ogo in heshiiskani uu ahaa mid soo jiray iyo mid la bilowday xukuumada cusub ee Madaxweyne Siiraanyo.
Wararka ayaa waxay sheegayaan in ciidankii ONLF, ee dhawaan ka soo degay xeebaha Somaliland uu ahaa mid qorshaysan oo ay la socotay xukuumada Somaliland. Ciidankaas waxaa la socday baa la leeyahay 30 ruux oo macalimiin milatari ah, kuwaas oo loo gudbiyey dhinaca gabalka Togdheer.
Dhinaca kale Odayaasha Gabalka Boorame ayaa gaashaanka ku dhuftay eedayn ay xukuumadu u soo jeedisay masuuliyiinta gabalka Boorame. Odayaasha ayaa sheegay in eeda ciidamada ka soo galay gabalka Awdal ay xukuumadu la socotay qorshaha ay ku soo galeen, ayna khalad tahay in cid kale la eedeeyo.
Waxaa aad u soo badanaysa astaamaha colaada ee u dhaxeeya Hargeysa iyo Burco iyo Waliba dadka reer Boorame, waxaana saaka laga helay magaalada Burco laba ruux oo Mayd ah, oo aan la garanaynin wax dilay, waana markii ugu horaysay ee la arko arimo noocan ah.
Madxweyne Siiraanyo iyo xukuumadiisa ayaa waxay wadaan qorshe aan u jeedadiisa la garan oo ay ku taban taabinayaan kooxda Jwxo-shiil. Somaliland ayaa hore waxay u soo qabqaban jirtay xubnaha ururka ONLF iyo Jabhadaha kale ee hore ugu kacsanaa jiray dawlada Itobiya, kuwaasi oo xiligan la heshiiyey dawlada.
Dhalinyaradii ka Badbaaday Qorshihii Qumaadka